Condenser evaporative - Counter Flow
Condenser evaporative - lakroa
Ny Dry Cooler antsoina koa hoe Liquid Cooler dia mifanaraka amin'ny toerana misy ny tsy fahampian'ny rano na ny rano dia fananana lafo vidy.
Tsy misy rano dia midika fanafoanana ireo residue sokay azo atao amin'ny coil, fanjifana rano aotra, famoahana feo ambany. Izy io dia misy dia ny Induced Draft ary koa ny safidy Forced Draft.
FIZARANA PRODUCT SPL
■ Fanjifana rano aotra
■ Kely fikolokoloana.
■ Tsy ilaina ny fatra simika.
■ Fitaovana manohitra ny harafesina sy haitao ankehitriny izay tsy mila fanaraha-maso fotsiny.
■ Tsy misy petra-bola / Limescale apetraka amin'ny vombony / Tube.
DETALY PRODUCT SPL
•Fitaovana fanamboarana: fantson'ny vombony varahina sy aliminioma.
•Iray amin'ireo mampiavaka indrindra ny vata fampangatsiahana rivotra antsika ny fahamendrehany. Ny fisainana noforonina indrindra amin'ny fampiharana indostrialy dia tsy maintsy miantoka ny fahombiazan'ny optimum sy ny fanoherana ny fizotran'ny fotoana sy ny fepetra miasa be.
•Ny singa rehetra izay manohana na manamboatra ny coil, ary koa ny fanohanan'ny rafitry ny mpankafy dia namboarina tamin'ny takelaka na mombamomba ny vy nandrisika manana hatevin'ny 2 na 3 mm.
•Ny tongotra na ny vatofantsika vatofantsiky ny iray manontolo dia atsangana ihany koa miaraka amin'ny mombamomba ny ravina milanja 4 mm.
PFitsipika momba ny asa: Ny Air Cooler dia mampiasa ny Air Ambient mba hampangatsiaka ny tsiranoka Process ao anaty coil. Ny tsiranoka mafana dia mamoy ny hafanana amin'ny alàlan'ny fantsona Copper sy ny vombony omena hampitombo ny faritra famindrana hafanana.
Ny mpankafy dia mitaona na manery, ny rivotra Ambient ambonin'ilay fonosana Finned Coil, izay mitondra ny hafanana avy amin'ny tsiranoka ary hiparitaka amin'ny atmosfera.
Raha sendra mpankafy volavola Induced ny fantsom-bozaka dia hita eo ambanin'ny mpankafy. Ny mpankafy dia miaro ny fantsom-boaloboka mba hampihenana ny fitaoman'ny tara-masoandro, rivotra, fasika, orana, oram-panala ary oram-baratra, ka ny fitaovana ampangatsiahana amin'ny rivotra dia manana fahombiazan'ny famindrana hafanana maharitra; miaraka amin'izay dia afaka mizara madiodio amin'ny rivotra ambany izy io.
Raha sendra mpankafy drafitra an-keriny dia eo ambonin'ireo mpankafy no amboaran'ny fantsona. Izy io dia mety amin'ny fampiharana ny fizotran'ny hafanana avo lenta, mora ny manadio sy manamboatra azy, tsy mikojakoja firy amin'ny fanjifana angovo ambany.
Ny rivotra mangatsiaka mampiasa rivotra ho mpanelanelana dia tsy safidy ambany amin'ny fampiasam-bola ambany sy ny vidin'ny fandidiana ambany ihany, fa ny safidy ihany koa amin'ny fitsitsiana loharanon-drano voafetra, mampihena ny famoahana ireo maloto indostrialy ary miaro ny tontolo voajanahary.
•fahefana •Indostria simika
•LAV •Vy sy vy
Teo aloha: Open Type Steel Cooling Tower - Cross Flow
Manaraka: Hybrid Cooler
Cooler evaporative tsara indrindra
Coster Air Cooler
Cooler évaporative évaporative indostrialy